Arbitration Abaqondisi-Mthetho Attorneys - Priori
Arbitration Abaqondisi-Mthetho Attorneys — Priori
Oko kuxhomekeke iimfuno inkampani yakho
Arbitration unikezela ingxelo enye
Arbitration inikezela iinkampani a private, indlela settle contractual disputes, ngoko ke, ukuba ishishini unako ukuzithwala kwi njengesiqhelo kwaye onke amaqela unako ukufumana enobulungisa sikazwelonke. Ukuba ufaka drafting isivumelwano, ibe okulungileyo ukuxoxa kuquka i-arbitration lokulingana kuba imbambano ubungakanani kunye yakho isivumelwano lawyer. Kwaye ukuba ufuna kokuqwalasela arbitration emva imbambano sele arisen, i-arbitration lawyer ukususela Priori womnatha unako ukunceda wena settle ekhoyo kunjalo nge-arbitration kunye eyona sikazwelonke kunokwenzeka. Arbitration ngumzekelo enye imbambano isisombululo umgaqo-nkqubo amaqela unako ukukhetha endaweni kokuya enkundleni. Arbitration kufuneka consensually esikhethiweyo ngumthetho kunye amaqela idla kwi-yoqobo isivumelwano phakathi amaqela amabini. Nawuphi na umthetho osebenzayo, ulwimi, kwaye venue kusenokuba esikhethiweyo kuba arbitration, kwaye arbitration inje mbasa a ngakumbi ezimeleyo khetho. Okubaluleke kakhulu, arbitration ngu ziyimfihlo, oko kuthetha ukuba iinkcukacha meko kugcinwa khona kwi-wonke ubungqina kwaye omabini amaqela unako uphephe-wonke scrutiny. Ngexesha arbitration, amaqela khona amatyala ngendlela efanayo njengoko babeya kwi inkundla meko yolawulo ka-arbitrators abo bonyulwa yi-amaqela ngokwabo yi-mutual iyivume. Ngexesha arbitration ngokubanzi proceeds kwi ngaphantsi kulandelwe indlela kunokuba inkundla kunjalo, kwicala ngalinye ubani ithuba ukuvelisa ubungqina, umnxeba amangqina, aze kunika ubungqina, ngolohlobo kwi inkundla meko. Omabini amaqela ngokubanzi ingaba bemelwe arbitration abaqondisi-mthetho abo ukuqinisekisa ukuba kunjalo uyaya njengoko smoothly kangangoko kunokwenzeka. Kanye kwicala ngalinye sele zichaziwe zabo kunjalo, arbitrators ngxoxo-mpikiswano kwaye umthetho. Iziphumo zinikezelwe ukuhla yi-arbitrators ingaba bophelela nangona kwezinye iimeko abo kusenokuba appealed. Arbitration zingasetyenziswa kwi-phantse nasiphi na imeko apho ungakwazi sue.
Isiphumo unako ke unyanzeliswe iinkundla njengathi naliphi na judgement
Nangona kunjalo, arbitration kakhulu commonly asetyenziswa BB izivumelwano, ingakumbi kwi-ngamazwe urhwebo. Naziphi na ezimbini amaqela ungquzulwano unako mutually khetha arbitration njengoko i-enye imbambano isisombululo foram, kodwa abaninzi izivumelwano ngoku ziqulathe clauses ukuba umkhosi imbambano kwi arbitration kunokuba litigation. Omabini amaqela ingaba assumed ukuba ingaba ngaphambili wavumela arbitration, waiving zabo ilungelo kuviwa ngo inkundla. Ezi clauses zithe imvelaphi kakhulu imbambano, njengoko abo bakholisa ukuba ukuthandwa i-iqela elikhulu, ingakumbi xa involving abasebenzisi bamanzi okanye abasebenzi. Namhlanje, iinkundla uza phantse rhoqo ukuxhasa a inkqubo esisinyanzelo arbitration lokulingana bavumelana yi-omabini amaqela isivumelwano, nokuba kunganjalo a standard isivumelwano ukuba umthengi ayikwazanga bayathetha.
Nangona kunjalo, oku ukutshintsha
Federal iinkundla bawala nayiphi na inkqubo esisinyanzelo arbitration clauses in umsebenzi izivumelwano, ngokunjalo consumer-mali iinkonzo izivumelwano. Ngaphaya koko, inkqubo esisinyanzelo arbitration clauses ayikwazi preclude iklasi intshukumo, oko kuthetha ukuba abanye consumer izivumelwano kunye inkqubo esisinyanzelo arbitration clauses zithe ngokufanayo asivunywanga. Baninzi okuninzi ukuze arbitration i-fact ngokudlulela kukhokelele yayo ukukhula kwiminyaka yakutsha nje. Ezi zilandelayo zezinye leqhosha pros ka-arbitration: Arbitration inje mbasa ukuba abe ngaphantsi hostile kunokuba litigation, njengoko amaqela ingaba rhoqo bayakhuthazwa ukuba basebenzisane ukuze abumbe lonke ityala lesi a inzuzo xa inkampani yakho unqwenela ukuqhubeka kwishishini budlelwane. Arbitration ize eyokugqibela settlements ingaba ngokubanzi ziyimfihlo, evumela iinkampani ukuba settle disputes ngaphandle wongeza media scrutiny. Xa amaqela? jikelele kufuneka ahlawule kuba abaqondisi-mthetho kwaye kufuneka ahlawule iindleko i-arbitrators kwabo, arbitration? idla iindleko ngaphantsi kwixesha elide elizayo, ngenxa disputes kusenokuba ube sowuzinzile ngakumbi ngokukhawuleza kwaye kufuneka abangaphantsi chances kuba nezibheno. Umndilili arbitration ngu wahlala nje phezu ngonyaka ukusuka kwi-filing ukuba isigqibo, ngexesha elifanayo iintlobo iimeko ingaba thatha i-avareji leminyaka emithathu kwaye phantse rhoqo, ubuncinane, ishumi elinesibhozo zidlulileyo. Procedural imigaqo kwi-arbitrations ingaba iselwa flexible imiba ubungqina kwaye ubungqina uluhlu kusenokuba ikuvumile kwi-ingxelo emfutshane umnxeba. Inkundla nemigaqo-nkqubo azinako silungelelaniswa, nangona kunjalo, oko kuthetha ukuba baye kuthabatha kakhulu ixesha elide settle. Dibanisa, arbitrations kusenokuba scheduled jikelele amaqela izibophelelo, xa iinkundla nika kakhulu abancinane ukutyeba komhlaba ngokwesi cwangcisa. Ngexesha rhoqo i-appealing enye, arbitrations kanjalo kuba abaninzi disadvantages ukuba ukwenza kwabo ngaphantsi appealing ngendlela ethile kwiimeko. Ezi zilandelayo zezinye leqhosha cons ka-arbitration: Xa uninzi kulandelwe arbitration organizations ingaba kuba abanye isibheno iinketho, uninzi arbitration izigqibo ingaba bophelela. Ke, kokukhona kunzima bucala i-arbitration sikazwelonke kunokuba inkundla ke determination. Arbitration unako ngamanye amaxesha ukuthandwa i-iqela elikhulu ngakumbi heavily, ingakumbi ukuba iimeko involve abasebenzisi bamanzi. Arbitration kubaluleke kakhulu ezintshana kwaye ngaphantsi kwe-wonke inkundla iingxoxo, kwaye ngamanye amaxesha abantu kusenokuba overrun yi-ngakumbi sophisticated amaqela kunye arbitration amava. Nangona arbitration okwangoku ngaphantsi kwe-expensive litigation, inyuke iindleko i-arbitrators imirhumo kuqhubeka khwela. Oku kubaluleke ngakumbi prohibitive ukuba encinane, iinkampani kwaye abasebenzisi bamanzi, nkqu njengoko initiating kunjalo iindleko iselwa kancinci imali kwaye abo iindleko ziya kuba xa kuqaliswayo ukuyinyamezela yi-omabini amaqela. funani ukusombulula disputes ngaphandle iinkundla ngaphandle resorting ukuba kulandelwe litigation, kodwa abakho efanayo iintlobo iinkqubo. Mediation ibandakanya a negotiation phakathi kwamaqela ukuba ufumana i-non-bophelela kunye mayuda wayekhonza ngakumbi njengoko a facilitator kunayo nantoni na enye into, ngexesha arbitration isebenza ngakumbi ngathi i -«ndibhala le leta»inkundla kunye arbitrator yokusebenza njengoko ijaji. Kwi-arbitration,»ruling»zokugqibela kwaye bophelela, kodwa mediation ingaba akusoloko iziphumo othile bophelela isisombululo. Xa bobabini mediation kwaye arbitration kufuna ukusombulula ingxabano ngakumbi ngokukhawuleza kwaye ngasese, kuphela arbitration unako iziphumo a bophelela sikazwelonke ukuba umntu akakwazi umi kunye kunzima ukusebenza ngokupheleleyo. Inkqubo esisinyanzelo arbitration wenziwe prohibited e-United States ngowe-msebenzi izivumelwano kwaye umthengi-mali iinkonzo izivumelwano, kwaye kubalulekile limited kwi-consumer izivumelwano